ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် အိုလံပစ်အားကစားသမားများအား Sinovac နှင့် Pfizer ကာကွယ်ဆေးများ စတင်ထိုးနှံပေး - Xinhua News Agency
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ အိုဒိုင်ဘာအဏ္ဏဝါဥယျာဉ်သို့ သယ်ဆောင်လာသည့် ကြီးမားသောအိုလံပစ်သင်္ကေတအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး၊ မေ ၁၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဘရာဇီး အားကစားသမားများ၊ နည်းပြများနှင့် စာနယ်ဇင်းသမားများအား တိုကျိုအိုလံပစ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ Sinovac နှင့် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီမှ Pfizer COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများအား မေ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ထိုးနှံပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် မြို့ကြီး ၆ ခုဖြစ်သည့် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး၊ ဆောပိုလို၊ ဖော်တာလီဇာ၊ ပေါ်တူအလာဂရေ၊ ဘရာစေးလေးယားနှင့် ဘယ်လိုဟော်ရီဇွန်တီမြို့ တို့တွင် အိုလံပစ်နှင့် မသန်စွမ်းအိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် လူဦးရေ ၁,၈၀၀ ခန့်အား ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြှားပစ်အားကစားသမား Marcus Vinicius D’Almeida က “ဒါက ကျွန်တော့်ကို ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ကျွန်တော်ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ခြင်းကို တားမြစ်ထားတယ်။ အခုတော့ ဖျားနာမှာ ပူပန်စရာမလိုဘဲ အိုလံပစ်အတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေ အပြည့်အစုံလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီလို့ ခံစားရတယ်’’ ဟုပြောသည်။
ဖိတ်ခေါ် မာရသွန် ရေကူးသမား Ana Marcela Cunha သည် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး ၌ ပထမဆုံး ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့် ကစားသမားဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဆေးတစ်ကြိမ်ထိုးနှံမှု ခံယူတိုင်း နောက်ထပ်ဆေးနှစ်ကြိမ်စာထိုးနှံမှုအတွက် လှူဒါန်းပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်နည်းအားဖြင့် အားကစားဟာ ဘရာဇီးလူမျိုးတွေရဲ့ကောင်းကျိုးသုခကို များစွာအထောက်အကူပြုနေပါတယ်’’ ဟု ၅ ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံက ပြောသည်။
ဂျာမနီ၊ သြစတြေးလျ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ကနေဒါ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ နယ်သာလန်၊ ဟန်ဂေရီ၊ ဗြိတိန်၊ အစ္စရေး၊ လစ်သူယေးနီးယား၊ မက္ကဆီကိုနှင့် နယူးဇီလန်အပါအဝင် အခြားနိုင်ငံများကလည်း ၎င်းတို့၏ အိုလံပစ်အားကစားသမားများအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအစီအစဉ်များအား ကြေညာမည်ဖြစ်သည်။
တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများအား ဇူလိုင် ၂၃ မှ သြဂုတ် ၈ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် တစ်နှစ်ရွှေ့ဆိုင်းထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘရာဇီးအားကစားသမား ၂၀၀ ကျော်သည် အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိထားပြီး နိုင်ငံကိုယ်စားပြုအဖွဲ့တွင် ဦးရေ ၃၀၀ ခန့်အထိ ရှိနိုင်ကြောင်း ဒေသခံအရာရှိများ၏ အဆိုအရ သိရသည်။ (Xinhua)
RIO DE JANEIRO, May 14 (Xinhua) — Brazilian athletes, coaches and journalists on Friday began receiving COVID-19 vaccines from China’s Sinovac and US firm Pfizer in preparation for the Tokyo Olympics.
Brazil will inoculate round 1,800 people associated with the Olympics and Paralympics, with doses being administered in six cities: Rio de Janeiro, Sao Paulo, Fortaleza, Porto Alegre, Brasilia and Belo Horizonte.
“I feel like it gives me protection,” said archer Marcus Vinicius D’Almeida. “They blocked my participation in some countries, so now I feel like I can complete my Olympic preparations without worrying about getting sick.”
Open water marathon swimmer Ana Marcela Cunha was the first athlete to receiveavaccine dose in Rio de Janeiro.
“For each dose that we are receiving, two doses are being donated. So, inaway, sport is contributingalot to the well-being of Brazilians,” the five-time world champion said.
Other countries to have announced vaccination programs for their Olympic athletes include Germany, Australia, Belgium, Canada, South Korea, Japan, the Netherlands, Hungary, Britain, Israel, Lithuania, Mexico and New Zealand.
More than 200 Brazilian athletes have already qualified for the Games and the contingent could reach up to 300, according to local officials. Enditem